Hunhu Management - Pandawill Technology Co, Ltd.
Isu tinoshandisa iyo yepasi rose inozivikanwa mhando yezvinhu zvakasvibirira uye tinoita yekuongorora chiyero zvinoenderana neInternational Standard uye mutengi zvinodiwa. Isu tinoramba tichiona vatengesi zvinoenderera mberi nekuvandudza zviitiko uye nekuvaka kwenguva yakareba kudyidzana nevatengesi vese.
Mu-Maitiro Ekugadzirisa Kudzora
Zvigadzirwa zvakanaka zvinobva mukugadzirwa kwakanaka asi kwete kuongororwa. Isu tine yakajairika yekugadzira maitiro uye yakadzama mirayiridzo yebasa kune yega yega chiteshi chekushandisa mune yekugadzira mutsara kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro muyero anoitwa nemazvo.
Yekupedzisira Hunhu Kudzora
Isu tinoongorora uye tinodzora zvakanyatsobuda izvo zvigadzirwa zvinobuda mhando zvinoenderana nematanho epasi rose uye nemutengi zviyero, tevera hunhu mashandiro ezvigadzirwa mushure mekutengesa uye titore nekukurumidza uye inoshanda zviito zvekuvandudza kana paine chero chisina kujairika mhando mhinduro.